द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउन सरकार मान्दैन : अध्यक्ष शर्मा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
रामबाबुले मिलाउलान् त भद्रगोल भएको 'फनफनी' ?
काठमाडौँ — 'भद्रगोल'बाट चर्चामा आएका कुमार कट्टेल (जिग्री)ले करिब २ वर्षअघि फिल्म 'फनफनी' बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अनौपचारिक घोषणा गरेर फिल्मको लागि निर्देशकमा निश्चल बस्नेतसमेत अनुबन्धित गरिसकेका थिए।
तर, बीचमै निश्चलले यो प्रोजेक्टबाट हात झिके। त्यसपछि फिल्मको निर्माण रोकियो। 'फनफनी'का लेखकसमेत रहेका जिग्रीले फिल्म चाँडै फ्लोरमा जाने कुरा गरेर टारिरहे। तर, घोषणा भएको २ वर्ष नाघ्न लाग्दा पनि यो फिल्म बन्ने नबन्ने टुङ्गो छैन। कुमारका दाइ सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले त्यसपछि घोषणा गरेको फिल्म पनि बनिसक्यो। प्रदर्शनको तयारीमा छ 'सेन्टी भाइरस'।
जिग्री भने आफ्नै व्यस्ताताले यो फिल्म अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। 'अब हाम्रो व्यस्ताताले पनि यो फिल्मपछि धकेलिएको हो। बीचमा निश्चलजीले पनि फिल्म छोडनुभो, अर्को प्रोजेक्टमा जोडिनुभयो। अहिले हामी तयारी गर्दैछौं। अब माघमा हामी औपचारिक घोषणा गर्छौं। फिल्म चाहिँ बन्छ,' उनले भने 'सेन्टी भाइरस'को प्रदर्शनपछि यो फिल्म फ्लोरमा जान्छ'।
निश्चलले नै छोडेर रोकिएको हो फिल्म?
उनले जवाफमा भने, 'निश्चलले छोडनु नै प्रोजेक्ट रोकिनुको कारण होइन। हाम्रो पनि तयारी अपुग थियो। अरु प्रोजेक्टमा हामी व्यस्त भयौं। टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आउँदो रहेछ। अब चाहिँ हामी यसमा फोकस हुन्छौं ।'
कमेडीजनरामा बन्ने भनिएको फिल्ममा अभिनेता विपिन कार्की, अर्जुन घिमिरे (पाँडे) कलाकारमा फाइनल भइसकेका छन्। अभिनेत्रीसँगै अन्य कलाकार फाइनल हुन बाँकी छ। विशेष त फिल्मको लागि निर्देशकको खोजीमा छन् जिग्री।
उनले 'सेन्टी भाइरस' निर्देशन गरेका रामबाबु गुरुङसँग 'फनफनी'का लागि कुरा गरिसकेका छन्। लगभग उनी नै फिल्मको लागि निर्देशकमा फाइनल भइसकेको जिग्री बताउँछन्। 'सेन्टी भाइरस'को काम सकिएपछि उनले यो फिल्म निर्देशन गर्ने पक्कापक्की भएको छ। अब हेरौं 'भद्रगोल' अवस्थामा रहेको जिग्रीको 'फनफनी' बन्छ, बन्दैन।
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १३:१२